Perez: Qiimaha lagu burburin karo qandaraaska CR7 waa 880 milyan | Midnimo Online | Somalia News and Media
Home Sports Perez: Qiimaha lagu burburin karo qandaraaska CR7 waa 880 milyan
Perez: Qiimaha lagu burburin karo qandaraaska CR7 waa 880 milyan
Madaxweyne Florentino Perez oo saxaafadda la hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii ay soo baxeen wararkaan xanta ah 16kii bishaan June, ayaa wuxuu u sheegay Idaacadda Spain laga dhegeysto ee Onda Cero: “Lama aanan hadlin Cristiano tan iyo finalkii koobka UEFA Champions League. Waxaanse wararkaan xanta ah ka maqlay saxaafadda.
“Balse, qiimaha qandaraaskiisa lagu burburin karo waa 880 milyan oo ginni. Sidaas darteed, haddii aysan imaan koox diyaar u ah inay bixiso qiimahaas, markaas Cristiano kama tegi doono Real Madrid”.
Sidoo kale Perez, oo markiisii shanaad si taariikhi ah loogu doortay Madaxweynaha Real Madrid ayaa wuxuu caddeeyey inuu doonayo inuu xalliyo mustaqbalka 32 sanno jirkaan, wuxuuna sidoo kale diiday eedeymaha dowladda Spain ee sheegaya inuu lacago canshuur ah khiyaamay CR7.
Perez ayaa hadalkiisa ku daray: “Cristiano waa nin wanaagsan, waxaa laga dhigay sida shaqsi dambiile ah oo kale. Waan la hadli doonaa isaga markuu soo guto waajibkiisa xulka Portugal ee koobka FIFA Confederations Cup.
“Uma maleynaayo inuu u careysan yahay Real Madrid, waxaanse u maleynayaa inuu si guud xaaladdaan uga careysan yahay”.
Madaxweynaha FIFA oo hambalyeeyay madaxweynaha kubada cagta Soomaaliya
Somalia: SFF president visits FIFA Home, meets with President Infantino